Mba hahatakarana ny karazana fahadisoana mety hitranga amin'ny fanamafisana ireo mpangataka amin'ny vahoaka be, dia andeha hijerena ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fandikan-dalàna momba ny sigara, izay niezaka naminavina ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena amerikanina tamin'ny 1936. Na dia efa mihoatra ny 75 taona lasa izay aza dia mbola misy lesona manan-danja ihany ity lesoka ity mba hampianarana ireo mpikaroka ankehitriny.
Mpandihy literatiora dia gazetim- bahiny malaza iray, ary nanomboka tamin'ny taona 1920 dia nanomboka nandatsa-bato ny herisetra mba haminavina ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena. Ho fanatanterahana ireo faminaniana ireo, dia handefa vatom-pifidianana ho an'ny olona marobe izy ireo ary avy eo dia mampiakatra fotsiny ireo vatom-pifidianana naverina; Nilaza ny mpikaroka literatiora fa ny vatom-pifindram-po azony dia tsy mbola "mavesa-danja, manitsy, ary tsy misy dikany." Izany dia nampahafantarana tsara ireo mpandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 1920, 1924, 1928 ary 1932. Tamin'ny taona 1936, teo anivon'ny Great Depression, literary Namoaka votam-bahoaka ho an'ireo olona 10 tapitrisa ny digestest, ka ny anaran-drakitra indrindra dia avy amin'ny finday telefonina sy ny firaketana fisoratana anarana. Toy izao no namaritan-dry zareo ny fomba fijeriny:
"MAMPIASA haingana ny fahaiza-manaon'ny telopolo taona ny milina mihodinkodina ao amin'ny DIGEST mba hampihenana ny fiheveran-tena amin'ny zava-misy sarotra ... Nandritra ny herinandro dia 500 pens dia nopotsaka mihoatra ny ampahefatry ny iray tapitrisa adiresy isan'andro. Isan'andro, ao amin'ny efitrano lehibe iray avo lenta mihoatra ny lozam-piaramanidina Fourth Avenue, any New York, dia 400 ny mpiasan'ny asa an-tapitrisany mamoaka teti-bola an-tapitrisa tapitrisa-ampy mba handrafetana efamira efapolo efapolo-ao anatin'ireto adiresy [sic]. Isaky ny ora, amin'ny toeram-piasan'ny station Post Office, dia nosoloina ny milina fandefasana horonantsary telo ary notapahana ny lamosina fotsy; Ireo mpanazatra ny serivisy dia namatotra azy ireo ho lasa milevina; Ny kamiao DIGEST dia nitondra azy ireo haneho ny mailaky ny fiarandalamby. . . Ny herinandro manaraka, ny valinteny voalohany amin'ireo zato tapitrisa ireo dia hanomboka ny fahatongavan'ireto vatom-pifidianana maromaro, mba hivezivezy am-pahamarinana, voamarina, ary indraindray dimy isam-bolana. Raha ny endri-tsoratra farany dia noraisina sy notsongaina, raha toa ka efa tranga ny traikefa taloha dia ho fantatry ny firenena ao anatin'ny ampahany amin'ny 1 isan-jato ny fifidianana malaza amin'ny 40 tapitrisa [mpifidy]. "(22 Aogositra 1936)
Ny fametavetana literatiora ny literatiora dia manondro avy hatrany ny mpikaroka "lehibe data" androany. Vola 10 tapitrisa nozaraina, 2,4 tapitrisa mahagaga no naverina - izany hoe in-1000 avo lenta kokoa noho ny fitsapan-kevitra ara-politika ankehitriny. Avy amin'ireo mpangataka 2.4 tapitrisa, mazava tsara ny didim-pitsarana: i Alf Landon dia handresy an'i Franklin Roosevelt, izay tompon-trosa. Saingy raha ny marina dia resin'i Roosevelt i Landon tamin'ny fihotsahan'ny tany. Ahoana no ahafahan'ny literatiora fandikana diso amin'ny tahiry betsaka? Ny fahatakarantsika maoderina momba ny fakan-tsakafo dia manazava ny fahadisoana nataon'ny Literary Digest ary manampy antsika tsy hanao fahadisoana toy izany amin'ny ho avy.
Ny fisainana mazava momba ny famolavolana dia mitaky antsika handinika vondrona samihafa efatra (faha-3.2). Ny vondrona voalohany no vondron'olona kinendry ; Ity no vondrona raisin'ny mpikaroka ho toy ny mponina liana. Raha ny Literary Digest , ny mpifidy dia mpifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 1936.
Taorian'ny fanapahan-kevitry ny mponina iray, dia mila manamboatra lisitr'ireo olona azo ampiasaina amin'ny famolavolana ny mpikaroka iray. Ity lisitra ity dia antsoina hoe raki-peo samihafa ary ny olona ao aminy dia antsoina hoe olona israeliana . Amin'ny ankapobeny, ny tanjona dia ny isan'ny mponina sy ny fokonolona, ​​saingy matetika izany no tsy tranga. Ohatra, raha ny boky Literatiora Digest , ny mponina dia olona 10 tapitrisa izay ny ankamaroany dia nizara ny anaran'ny telefaona sy ny firaketana an-tsoratra momba ny fiara. Ny fahasamihafana eo amin'ny mponina sy ny fokonolona dia miantso ny fahadisoana momba ny fandrakofana . Ny fahadisoana fandrakofana dia tsy manome antoka ny olana. Na izany aza, dia mety hitarika ho amin'ny fandrakofam-baovao izy raha toa ny olona ao amin'ny fokonolona dia samy hafa tanteraka amin'ny olona ao amin'ny vahoaka lasibatra izay tsy ao anatin'ny fokonolona. Izany, raha ny marina, dia marina ny zava-nitranga tao amin'ny fitsapan-kevitra Digig Digest . Ny olona ao amin'ny fokon-dry zareo dia nila nanohana kokoa ny Alf Landon, anisan'izany satria mpanankarena izy ireo (tsarovy fa na dia telefaona sy fiara aza dia mbola vaovao sy lafo tamin'ny 1936). Noho izany, tao amin'ny fandaharam- pianarana Digar Digest , ny fahadisoana fandrakofam-baovao dia nitarika fitoniana.
Aorian'ny fifehezana ny mponina , ny dingana manaraka dia ny mpikaroka iray hifantina ny isan'ny mponina ; Ireo no olona izay manandrana ny hanadihady ny mpikaroka. Raha toa ny karazam-pahaizana dia manana karazana hafa noho ny fokonolona, ​​dia mety hampidirina famandrihana sampling ny famakian-tsakafo . Na izany aza, raha ny marina, ny litera Digest fiasco, dia tsy nisy ny fametrahana azy - ilay gazetiboky mba hifandray amin'ny olon-drehetra ao amin'ny fokonolona-ary noho izany dia tsy nisy ny fahadisoana. Maro ny mpikaroka no mifantoka amin'ny fahadisoana amin'ny fakam-panahy. Io no karazana fahadisoana tokana nalaina avy amin'ny fahadisoana diso notaterina tamin'ny fanadihadiana - fa ny litera Digest fiasco kosa dia mampahatsiahy antsika fa mila mandinika ireo loharanom-pahalalana rehetra isika, na samy hafa aza.
Farany, aorian'ny fisafidianana ny mponina, dia manandrana manadihady ny mpikambana rehetra ny mpikaroka iray. Ireo olona izay nadinadinina tamim-pahombiazana dia antsoina hoe ireo namaly . Ny tsara indrindra dia ny mitovy amin'ny olona sy ny mpanadihady dia ho mitovy, saingy amin'ny fomba tsy dia misy ny valiny. Izany hoe, ny olona izay nofantenina tao amin'ny santionany indraindray dia tsy mandray anjara. Raha tsy mitovy amin'ireo olona tsy manaiky ny olona izay mandray andraikitra, dia mety hisy ny fitongilanana tsy mitombina . Ny tsy fitongilanana tsy misy valiny dia ny olana lehibe faharoa amin'ny fitsapan-kevitra momba ny litera Digest . Ny 24% -n'ny olona izay nandray valim-bidy ihany no namaly, ary hita fa ireo olona izay nanohana an'i Landon dia mety hamaly.
Ankoatra ny maha-ohatra iray hampidirana ny hevitry ny fisoloana, ny valin'ny Literary Digest dia fanambarana matetika miverimberina, mitandrina ny mpikaroka momba ny loza ateraky ny fametrahana tsimokaretina. Indrisy fa eritreretiko fa ny lesona raisin'ny olona maro amin'ity tantara ity dia ny diso. Ny fitondran-tena mahazatra indrindra amin'ny tantara dia ny hoe tsy afaka ny hianatra zavatra avy amin'ny fakan-tsarimihetsika tsy azo atao ny mpikaroka (izany hoe, ohatra tsy misy fitsipika hentitra azo antoka ho an'ny mpandray anjara). Nefa, araka izay asehoko ato aoriana ato amin'ity toko ity, tsy marina izany. Fa kosa, heveriko fa misy fitondran-tena roa ho an'ity tantara ity; moraly izay toy ny marina amin'izao fotoana izao tamin'ny taona 1936. Voalohany, be dia be ny tahirin-kevitra voaangona tsy azo antoka fa tsy manome antoka ny tombantombana tsara. Amin 'ny ankapobeny, ny fananana olona be dia be dia be dia be dia be no manimba ny fitovian-tsoa, ​​saingy tsy voatery hampihena ny fitongilanana izany. Miaraka amin'ny angon-drakitra marobe, ny mpikaroka dia afaka mahazo tombanana marina avy amin'ny zavatra diso indraindray; Mety tsy marina loatra izy ireo (McFarland and McFarland 2015) . Ny lesona lehibe faharoa avy amin'ny fiasan-tsarin'ny Literary Digest dia ny hoe ny mpikaroka dia mila manoratra ny fomba nanangonana azy ireo tamin'ny fanombanana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, noho ny fizotry ny fizotry ny fitsapan-kevi-bahoaka tao amin'ny Literary Digest dia nodinihina tamin'ireo mpanadihady sasantsasany, ny mpikaroka dia nila nampiasa fomba fijery sarotra kokoa izay nanosika ny olona namaly kokoa noho ny hafa. Aorian'ity toko ity, dia hasehoko anao ny fomba fitandremana toy izany-post-stratification-izay ahafahanao manao tombanana tsaratsara kokoa amin'ny samihafa samihafa.